Kuboshwe othumbe usana lwasekhweni - Ilanga News
Home Izindaba Kuboshwe othumbe usana lwasekhweni
Kuboshwe othumbe usana lwasekhweni
Ucasulwe wukwenqatshelwa ukubona ingane yakhe angayihlawulile
UMNDENI wengane ebithunjiwe uthi umsolwa wesabise ngokuyinquma uqhoqhoqho ngommese ingane uma besondela.
ULALE ebaliwe owesilisa waseWaterloo, ngase-Verulam, osolwa ngokuthumba ingane yomlamu wakhe (kasbari) enezinyanga ezimbalwa izelwe ngoba ecasulwa wukwenqatshelwa ukubona ingane yakhe.
Kube wumzukuzuku ngoMsombuluko ngesikhathi umndeni wakwaDludla eWaterloo uzama ukuncenga umsolwa ukuba adedele ingane kaMnu Nkosinathi Dludla (33), enezinyanga eziwu10 izelwe, abesabisa ngokuyinquma uqhoqhoqho uma abalo mndeni besondela.
Ngokuthola kweLANGA, umsolwa unengane kudadewabo kaMnu Dludla, kanti bekunengxabano phakathi kwakhe umsolwa nonina wengane edalwe wukwenqatshelwa ukuba abone ingane yakhe.
Kubikwa ukuthi umsolwa udinwe yilokhu maqede wangena nezicabha kwaDludla, wadonsa ingane yomlamu wakhe wayoyivalela emzini wakhe ephethe ugolokogo lommese.
Ekhuluma neLANGA uMnu Dludla, uthi namanje usethukile emuva kokuba usibali wakhe egile lo mkhuba.
Uthi okwenza athuke kakhulu wukuthi usethola izinsongo emuva kokuboshwa kukasibali wakhe.
“Lo muntu unengane nodadewethu. Ngelanga lesigameko kube nengxabano phakathi kwabo efuna ukubona ingane yakhe. Udadewethu ubenqaba nayo ingane ngoba ethi usibali akayikhokhelile ingane ekhaya.
“Usuke lapho wacasuka maqede wadonsa ingane yami ebisendlini ngaleso sikhathi. Ngithe ngizama ukusondela, wadonsa ummese esho ukungiqeda ngawo.
“Ungitshele ukuthi uma ngike ngasondela uzoyinqamula uqhoqhoqho ingane yami. Usuke lapho waphuma wahamba nayo wayozivalela emzini wakhe nengane yami. Sizamile ukumncenga ukuba ayidedele ingane kodwa wasesabisa ngokuthi uma sike sangena endlini uzoyibulala ingane.
“Kuphele cishe isikhathi esingaphezulu kwehora sizama ukukhuluma naye ukuba adedele ingane. Sibe sesishayela amaphoyisa afika esazivalele nengane endlini.
“Amaphoyisa abe esengena ngaphakathi kanti kungaleso sikhathi ayishiye khona ingane waphuma wabaleka. Amaphoyisa ayithole ingane yami iphansi, ngenhlanhla ingalimele,” kusho uMnu Dludla.
Uthi okumphatha kabi wukuthi usethola izinsongo kubantu angabazi bemsabisa.
“NgoLwesibili ngithole ucingo kumuntu engingamazi, engibuza ukuthi ngizoyimela yini le nto engiyiqalile. Kungixakile lokhu ngoba mina kangihlangene nento eqhubeka phakathi kukasibali nodadewethu.
“Kwakhona ukuthi athathe ingane yami kangazi ibingenaphi kuyo yonke le nto. Kunzima ngoba sengesaba nokuhlala ekhaya emuva kokuthola lezi zinsongo,” esho.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCapt Nqobile Gwala, usiqinisekisile lesi sigameko, wathi ukhona umsolwa oboshiwe ngecala lokuthumba.
Previous articleAmaZulu FC anciphisa imiholo yabadlali
Next articleIkhonondise ungqongqoshe wamaphoyisa eyamaphara